Family Guy dia tena malaza TV fampisehoana izay tian'ny fampianarana sy ny vahoaka. IGT nioty ny fampisehoana ka nanao azy niakatra ho any an slot lalao sy izay nandray tsara ny mpilalao. Ny mpilalao dia handeha Gaga ny slot ity lalao. Izany dia maneho ny mpilalao amin'ny sasany amin'ireo endri-javatra mampientam-po indrindra sy lehibe Fandresena.
Family Guy dia mivelatra ny lehibe Dada a! ny lalao izao tontolo izao, IGT. IGT na iraisam-pirenena Teknolojia Gaming dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny aterineto slot lalao mpandraharaha. IGT dia fantatra amin'ny anarana hoe Gtech aloha S.p.A sy Lottomatica S.p.A. Izany dia lalao iraisam-pirenena developer amin'ny foibe any Londona sy ny anjara fanompoana lehibe hita tany Roma, Las Vegas sy Providence.
Tamin'ny taona 2015, io orinasa naka ny International Gaming Teknolojia ary nandray ny anaran'ny orinasa ity.
Family Guy maka ny mpilalao an-tany hafa miaraka amin'ny namana fanomezana anarana Brian, Peter, Lois, Chris, Stewie, Meg sy ny namany. Tsy manana reels dimy amby telo-polo paylines. Izany no zavatra rehetra momba ny voly, fialam-boly sy ny vola.
Ny marika ahitana mpandray anjara rehetra avy amin'ny Griffin Family. Marika hafa dia ahitana honahona, Joe Swanson sy Cleveland.
Ny foto-kevitry ny slot dia tena mahaliana. IGT efa nanao asa lehibe eo amin'ny planina. Ny fihetsik'ireo sary mihetsika dia tanteraka enthralling. Ny mpilalao izay efa fantany ny fahitalavitra dia manaiky ny feo sy ny feo. Ny slot lalao dia manolotra tombontsoa mahatalanjona maro ho an'ny mpilalao. Misy be dia be ny tombony fihodinana, multipliers sy maimaim-poana ao ity spins voly lalao. Ireo lafin-javatra manome ny mpilalao ny fahafahana hanao izany koa ny lehibe sy be dia be ny mahafinaritra.
Ny mpilalao dia hahazo endri-javatra tahaka ny Amazing Guy tampon-tanety, World Bonus Feature, Ny mamo Mpihady Lavaka Bonus, Akoho Fight Bonus, Lois 'Hot Free Spins Bonus, Petera Feature, Stewie ny Feature, Brian ny Feature sy Lois 'Feature. Ireo rehetra ireo endri-javatra dia tena mahafinaritra sy hanampy ny mpilalao amin'ny mitsambikina sy ny faritry hameno ny banky amin'ny tena vola loka.
Family Guy dia lalao tsotra fitsipika. Misy ampy ny lafin-javatra mahaliana izay hitandrina izany, ary koa ny manao azy be karama. Izy io dia tsy maintsy hilalao ho an'ny mpilalao mitady mora- breezy sy mahafinaritra lalao.